vendredi, 01 avril 2016 10:42
01 aprily : Andron'ny Zandarimariam-pirenena
Tsy diso anjara amin'ny fotoam-pankalazana izay efa feno tanteraka ireo fandaharam-potoana ho amin'ny andron'ny 01 aprily ny zandary ao Mahajanga. Mifanojo tamin'ny datin'ny 01 aprily 1971, izay nisian'ny fanoherana ny Repoblika voalohany ka nisian’ny vono moka izay nahafatesana olona an’arivony tamin'izany tany amin'ny faritra atsimo. Tinapaka tamin'ny filankevitry ny minisitra farany teo fa averina ankalazaina ny 01 aprily ity andro manantantara ho an'ny zandary ity. Raha ny 02 aprily no tena daty votondro tokony ho fankalazana azy io.
mercredi, 30 mars 2016 10:45
RN5A Andapa – Sambava : Lasa mampidi-doza
Mila fitandremana fatratra ankehitriny ny fandehanana amin’ny lalam-pirenena faha-5A mampitohy an’Andapa amin’i Sambava. Mihatery ny lalana, tsy simba fa miharakotra bozaka sy tototry ny ala, noho ny tsy fahampian’ny fikojakojana. Mitaraina ny mpitatitra fa anisany mahatonga ny lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga amin’iny lalam-pirenena iny izany. Ankoatra ny lalana be fiholana mantsy dia tsy mifankahita ny fiara raha tsy efa samy akaiky satria feno ahitra sy hazo ny manodidina, manginy fotsiny ny omby miraoka ahitra amin’ny sisin-dalana.